तुलसीपुरमा मोतियाविन्दु शुन्य बनाइने - Pradesh Today तुलसीपुरमा मोतियाविन्दु शुन्य बनाइने - Pradesh Today
तुलसीपुरमा मोतियाविन्दु शुन्य बनाइने
फागुन २८, २०७५ प्रदेश टुडे
तुलसीपुर, २८ फागुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आँखाको मोतियाबिन्दु रोग शुन्य बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अभियानको फागुन ३० गते विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा उद्घाटन गर्न लागिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।
शाखा प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले फागुन ३० गते उक्त अभियानको उद्घाटन गरिने र अभियानलाई तिव्रता दिइने बताए । उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अबको पाँच बर्षभित्र उपमहानगरपालिकालाई मोतियाविन्दु मुक्त उपमहानगर बनाउनका लागि अभियान सुरु भएको बताए ।
‘मोतिविन्दु मुक्त तुलसीपुर, उज्यालो तुलसीपुर’ अभियान शुरु गर्ने लागिएको र यसको प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले शुभारम्भ गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । आँखाका रोगीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई सहज उपचारको ब्यवस्था मिलाउने शाखा प्रमुख डा दाहालले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा ३० गते नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को वीरेन्द्र मावि सुनपुर भ्यूडहरमा आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया कार्यक्रम हुन लागेको र सबैलाई सहभागिताको लागि आग्रह समेत गरे । सोही दिन मृगौलाको जाँच तथा विशेषज्ञ महिला डाक्टरबाट पाठेघरसम्बन्धी समस्याको चेकजाँच गरिने छ ।
विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा नसर्ने रोगको ब्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने समेत जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रममा बरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा सन्दुक रुईत तथा बरिष्ठ मृर्गौला रोग विशेषज्ञ डा ऋषिकुमार काफ्लेको सहभागिता रहने डा दाहालले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वडा नं. १ का अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारी, २ का अध्यक्ष राजु आचार्य, नेपाल नेत्रज्योती संघका सचिव सुरेन्द्र खड्कालगायतले भनाइ राखेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा ३० गते घोषणा भएको बन्द फिर्ता लगि अभियान सफल पार्न बन्द आयोजकलाई आग्रह समेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक विमल केसीले गरेका थिए । कार्यक्रमको बारेमा जानकारी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले गराएका थिए ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागू
अनुभव र प्रयासको वर्ष